'पहिले तपाई हामी बाँंचौ, अनि राहत प्याकेजको कुरा गरौंला'
जनतापाटी आइतबार, चैत १६, २०७६ मा प्रकाशित
के गरेर समय विताइरहनु भएको छ ?
विहानदेखि सांझसम्म नै काम गरेर खाने बानी परेको मान्छे, बसेर खान त निकै गाह्रो हुंदो रहेछ । छटपटि भैरहेको छ । तर, के गर्नु यसको विकल्प पनि त छैन । त्यसैले कंही कतै निस्किएको छैन । घर भित्रै बसिरहेको छु । जतिसक्दो बढी सुत्ने प्रयास गरिरहेको छु ।
कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ?
१०, ११ घण्टा त सुत्छु । तर, धेरै सुत्न पनि नसकिंदो रहेछ । बांकी रहेको समयमा साथी भाईसंग टेलिफोनमा कुरा गर्छु । कहां के भइरहेको छ भन्ने जानकारी लिन्छु । आपसी समन्वय गरेर कंही के गर्नु पर्नेछ, त्यो गरिरहेको छु । टेलिफोनमा पनि धेरै समय वितिरहेको छ । समाचारहरु हेरेर पनि केही समय विताइन्छ ।
स्थितिलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ ?
स्थिति गंभिर छ । त्यही भएरै सरकारले यो निर्णय गरेको हो । नेपालमा कोरोना भाइरसको कुनै प्रभाव थिएन र हुने संभावना पनि देखिएको थिएन । तर, जब यो चीनबाट फैलिएर युरोप अमेरिका पुग्यो । त्यताबाट मानिसहरु आउन थालेपछि समस्या देखिन थालेको हो र सरकारले त्यसपछि अलि बढी सर्तकता अपनाएको हो । नेपालमै रहेका नेपालीहरुको बीचमा त कुनै समस्या थिएन ।
विदेशमा अहिले जुन भयावह स्थिति देखिएको छ, त्यसको आधारमा हेर्दा त नेपालमा पनि डरलाग्दो अवस्था आउंदैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नेपाल सरकारले समयमै सावधानी अपनाएको छ । र, केही समस्याहरुको बावजूद पनि देशभरका नेपालीहरु पनि सचेत भएको, सावधानी अपनाएको पाइन्छ । त्यसैले कोरोना भाइरसले अरु कतिपय देशमा जस्तो महामारीको रुप लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन, कतिपय विषयमा हेलचेक्र्याईं गरिरहेको छ भन्ने गुनासाहरु पनि सुनिन्छन्, तपाईलाई के लाग्छ ?
यस्ता विषयहरु अनावश्यक आरोप मात्रै हुन् । आरोप लगाएर, गुनासो गरेर मात्र त केही हुंदैन । काम गर्दा अलिकति तलमाथि हुन सक्छ, कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । त्यो सामान्य कुरा हो । त्यसैको आधारमा सरकारले कामै गरेन वा गलत गर्यो भन्नु स्थितिलाई नबुझ्नु हो । विरोध मात्रै गर्ने प्रवृत्तिको कारण त्यस्तो भएको हुन सक्छ । अन्यथा अहिले नेपाल सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसमा दोष लगाउने ठाउं छैन । चीन, अमेरिका जस्ता देशहरु त अत्तालिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले यहां भन्दा बढी के गर्न सक्थ्यो ? त्यसैले म चांही अहिले सरकारले गरिरहेको कामलाई कमजोर छ, काम गर्न सकेन भन्ने पक्षमा छैन । सरकारले गर्नु पर्ने काम प्रभावकारी रुपमा गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
आपूर्ती प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बल्ल एक साता हुंदैछ । यही अवधिमा खानै नपाएर वर्वाद भयो भन्ने अवस्था कुनै नेपालीकोमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हो, भारतमा जसरी लक डाउन लम्बिएको छ, त्यसले गर्दा नेपालमा पनि लम्बिन्छ कि भन्ने आंशका छ । मलाई त अझै केही दिन लम्बाउनै पर्छ भन्ने लाग्छ, शायद सरकारले लम्वाउंछ पनि होला । त्यो अवस्थामा केही समस्या हुन सक्छ । त्यसको लागि सरकारले आपूर्ती रोकिदैन । आवश्यक पर्यो भने घर घरमै पनि खाद्यान्न लगायतका समानहरु पुर्याइदिन्छु भनिरहेको छ । पसलहरुलाई त्यहीअनुसार संचालन गराउने व्यवस्था गरिरहेको छ । त्यसैले आत्तिनु पर्ने अवस्था म देख्दिन । विश्वव्यापीरुपमा यति ठूलो समस्या आइलागेको छ, त्यसबाट हाम्रो दैनिक जीवन प्रभावित हुनु स्वभाविक नै हो नी । त्यत्तिकै आधारमा यो भएन, त्यो भएन भन्नु उचित होइन ।
अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिलेको घटनाले नेपालको मात्र होइन, विश्वकै अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति सृजना गरिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि निकै पछाडि धकेलियो । तर, वास्तविक रुपमा कति क्षति भयो, त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी यो समस्या कति समय पर जान्छ भन्न कसैले सक्दैन ।
सरकारी क्षतिपूर्ती प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा आइरहेको छ नी, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले नै त्यसबारेमा टिप्पणी गर्न हतारिनु हुंदैन । किनकी एकातर्फ समस्या कुन रुपमा अगाडि बढ्छ, कहां पुगेर टुंगिन्छ कसैले भन्न सकेको छैन । अर्काेतर्फ सरकारले पनि राहतको प्याकेज ल्याउन थालेको छ, अवस्था हेरेर कदम चाल्छु भनिरहेको छ । सायद सरकारले पनि कहां पुगेर यो समास्या समाधान हुन्छ भन्ने विचार गरिरहेको होला । त्यसपछि बल्ल समग्र अवस्थामा राहत धेरै थोरै कति भयो भनेर विचार विश्लेषण गर्नु ठीक हुन्छ । राहत भन्दा ठूलो कुरो ज्यान हो । पहिले त तपाई हामी बाँच्नु पर्यो । बाँचेपछि अरु कुरा ठीक हुँदै जान्छ । अहिले त बाँच्नै, पाइने हो कि नपाइने हो भन्ने अवस्थामा अरु कुरा गर्नु उचित हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तिहारकाे लागि ५० हजारभन्दा बढी सयपत्री फूलको माला भारतबाट आयात हुँदै ८ मिनेट पहिले
चार महिनापछि बस्याे पोखराको कार्यपालिका बैठक, कांग्रेसले गरेन हस्ताक्षर १४ मिनेट पहिले
सहकारीले नै दुग्ध प्रशोधन केन्द्र चलाउने ४२ मिनेट पहिले